ဒတ်ပုံဂပြောသောစဂါး picture | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ဒတ်ပုံဂပြောသောစဂါး picture
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on May 12, 2012 in Opinions & Discussion | 25 comments
ဒီဂနေ့ အင်တာနက်မှာ သမဒရုန်း အင်တာနက် စာမျက်နှာအကြောင်းနဲ့ အထူးအစည်းအဝေး ဒါ့ပုံသတင်း ဖတ်ရဒယ်။ သမဒဂျီးဂ ဝံကျီးအဖွဲ့နဲ့ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း ဝံကျီးဂျုပ်များဂို အာဝါဒရိုက်နေဒဲ့ပုံနဲ့ဘာ။ သူ့ဖာသာသူ အားယားနေလို့ မိန့်ခွန်းချွေဒါ ကိစ္စမရှိပါဘူး သို့သော် မျက်စိထဲ အမြင်မတော်ဒါဂလေးဂိုဒေါ့ ပြောဂျင်ဒယ်။
အယင်ဇုံး သမဒဂျီးဂနေစရရင် သူထိုင်နေဒဲ့ပုံကြည့်အုံး.. ဖင်လျှောကျဒေါ့မယ်..တော်သေးဒါပေါ့ ခြေထောက် ကယ်နေလို့။ ထိုင်ခုံအရွယ် ကြီးလွန်းဒယ်၊ တဂယ် အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အစည်းအဝေးခန်းမ ထိုင်ခုံများနဲ့မတူဘူး။ ကွန်းဖရင့်ဒွေမှာ နိုင်ငံတဂါကိုယ်စားလှယ်ဆိုသူများ အပေါ်ယံသဘော လျောက်လေပွားနေဒါနဲ့ ပိုတူဒယ်။ သမဒနဲ့ ဝံကျီး၊ ဝံလေးများ ဆွေးနွေးပွဲဆိုဒါ အလုပ်သဘော အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းတာ ဖြစ်ရမယ်။ သမဒဂျီး အလိုဒေါ်အတိုင်း လိုက်ပေးနေရဒဲ့ ပုံစံမျိုး မဖြစ်ရဘူး။ နို့မိုရင် ဘာပြုလို့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ဝံကျီးချုပ်ရာထူးဒွေ ထားပေးရမှာလဲ။ အဂုဟာဂ အယင် နအဖခေတ် ပြည်နယ်၊တိုင်း ငှက်ကထ လေးလပတ် အစည်းအဝေး ပုံစံနဲ့ ဘာမှမကွာပါ။
ကွန်ပြူတာ မော်နီတာတွေ စားပွဲပေါ်ထားတာ ဘာရည်ရွယ်ဂျက်နဲ့လည်းဒေါ့ မသိဘူး၊ ဖန်သားပြင်မျက်နှာ ကြီးလွန်းဒယ်၊ သိပ်ကြည့်ဂျင်ရင် မော်နီတာအသေးတွေ စားပွဲထဲမြှုပ်ထားလိုက်၊ ဒါမှမဟုတ် ခေါက်လို့ပြုလို့ရဒဲ့ မော်နီတာအရှင်တွေ တပ်ထားပေး။ Tabletအရွယ် အပေါ့စားလေးတွေ ဒီခေတ်ကြီှးမှာ ပေါဂျင်းသောဂျင်း။ ဆွေးနွေးသူများအဂျားး စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်း အတားအဆီး အတတ်နိုင်ဇုံး နည်းအောင် စီမံထားပေးရမယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကွန်ပြူတာနဲ့ ကာရာအိုကေ ဆိုပြီးမှ အစည်းအဝေးပွဲ ဆက်လုပ်..။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးပါ၊ ဗျူရိုကရေစီယန္တရား လျှော့ပါပြောပြီး ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးလုပ်နေလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။
အကယ်၍ ဒေါ်စု အစည်းအဝေးခန်းထဲ ရောက်လာရင်ရော.. သူ့အသံပဲ ကြားမယ်၊ မော်နီတာကွယ်နေလို့ မျက်နှာမြင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူထိုင်ခုံပေါ် ထိုင်နေရင်လည်း သေးလွန်းလို့ ပျောက်နေလိမ့်မယ်။ တဂယ် အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာအခင်းအကျင်းဆိုဒါ သက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊ ရင်းနှီးဖော်ရွှေမှုဂို ဦဇားပေးရဒယ်။ ဂဏန်းနံပါတ်များသည် ဘယ်ဒေါ့မှ မလိမ်ဆိုဒဲ့ စဂါးဆိုရိုးရှိသလို ဒတ်ပုံဂို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အတွေးအမြင် ရည်ရွယ်ချက် စဒါဒွေ မြင်နေရဒယ်။
အကြားအမြင်ရ သမထဦးကြောင်ကြီး :cool:
ခြစ်လုံးကြီးနေ၇ာလွတ်နေတာကောပြောတော့ဘူးလား.. ငိုက်သူတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ငိုက်နှို်င်အောင် မော်နီတာကြီးတွေ တင်ပေးထားတာနေမှာပေါ့။
ဒီနေရာမှာ ဦးနေဝင်းလုပ်သလို လုပ်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါဒယ် ။ ဦးနေဝင်း ဟာ သူထိုင်တဲ့ ထိုင်ခုံကို ကျန်တဲ့လူတွေ ထိုင်တဲ့ ထိုင်ခုံထက် ၉ လက်မ မြင့်ပြီး လုပ်ခိုင်းခဲ့တယ် ။ ဘယ်ပွဲမဆို သူဟာ ထီးထီးကြီး အမြင့်ကနေ ထိုင်ကြည့်ခဲ့တာပ ။
ဦးပေ .. အမေရိကံ သမဒ ကတော့ သူများထက် ကိုးလက်မနိမ့်ခိုင်းထားတယ် ထင်တယ်နော်
သဂျီးမင်းပြတဲ့ပုံတစ်ခုမှာ သူဂအားလုံးထက်နိမ့်နေတယ် :D
မော်နီတာတွေက တက်ခ်စကရင်တွေလားမသိဘူးနော်… ကီးဘုတ်လဲ မပါ ကြွက်လဲ မပါနဲ. အဆင်မြင့်တယ်နော..
ဒါမှမဟုတ် အခွံတွေချည်ထောင်ထားတာလား ဟင်…
အဲဒီလို အယ်စီဒီတွေ ထောင်ထားတာ ကွန်ပျူတာတွေနဲ.မတူဘဲ… နန်းတွင်းအပျိုတော်တွေ အလှပြင်နေတဲ့ မှန်တင်ခုံတန်းကြီးကျနေတာပဲ……… အဟင့် ပြောမိတွားဘီ အေ..
ဟုတ်ဘူးလေ.ဒီတခေါက်က မော်နီတာ အလှည့် နောက်တခါမှ ကီးဘုတ်ပါမယ်
အော်. မြင်ရတာတော့ ဦးကြောင်ရယ်. သမ္မတရော ဝန်ကြီးဆိုတဲ့
ကောင်တွေရော. ကွန်ပြူတာတွေ အဖွင့် အပိတ်မတတ်လို့ ဆိုဘဲ
နှိုင်းကြည့်ဖို့. အိုဘားမားကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးပုံ.. တင်ပေးလိုက်တယ်..
သူတို့တွေဘယ်လိုလုပ်နေသလည်း သိဖို့.. သူတို့ကို.. အဲဒီလိုအခန်းတွေ.. လေ့လာကြည့်နိုင်အောင်.. ဖိတ်ခေါ်ပြဖို့လိုတယ်ထင်မိတယ်..
အဲဒီလိုနဲ့.. မြန်မာအစိုးရနဲ့..လွှတ်တော်အမတ်တွေကို.. တခြားနိုင်ငံတွေ..လေ့လာဖို့.. လည်လည်ခေါ်တာတွေများလာမယ်.. ထင်တာပဲ..
ဟား….ဟား….ဟား….ဟား…………..သဂျီးတင်ပေးတဲ့ပထမပုံကိုကြည့်မိလိုက်ပါတယ်…..အိုဘားမားတို့များ 23 ယောက်စုပြီးလုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးမယ် ကွန်ပြူဒါလေး တစ်လုံးဒေါင် မရှိရှာဘူးရယ်……သနားထှာဟယ်…… ဦးသိန်းစိန်ဒို့နော် တစ်ယောက်တစ်လုံး(ကွန်ပြူဒါ)ပြောပါဒယ်………..ဟွန်း……….ဘာမှက်လဲ နာတို့သမ္မတရုံးအဖွဲ့ဂွ………သွပ်….သွပ်….သွပ်………..
အဲ့လာ အစွန်းရောက်ပုတ်ဂိုကြီးကို ၀င်စီးတုန်းက ၀ိုင်းကြည့်နေတဲ့ ပုံလား တဂျီး
ဟုတ်တယ်။ သမတကြီးက ခုံပေါ်က လျှောမကျသွားအောင် ခြေထောက်နဲ့ ထိန်းနေရတယ်။ ဟိဟိ …
အိုမြန်မာ အပေါ်က အစည်းအဝေးမှာ ထိုင်တဲ့ ကုလားထိုင် ကတော့ သူများနဲ့ မတူဘူးရယ်.. ဆိုတော့ အဆင့်အတန်းဆိုတာက တော့ခွဲတာပါဘဲ။
ကမ္ဘာကျော်ပုံမှာလည်း ကုလားထိုင်တွေ မတူပါဘူး ။ သူ ၀င်မထိုင်တာကတော့ ………ကိုယ်ကြိုက်သလိုတွေးကြပါကုန်……………..
သူများတွေက သူ့ဆိုဒ်နဲ့သူ အဆင်ပြေပါရဲ့။ တို့နိုင်ငံကတော့သူများတုပြီး ဟိတ်ဟန်ထုတ်ချင်နေတာလို့
E-Government ဆိုတာ အဲဒါလားဟင် မသွေ့ဘူးရို့မေးကြိတာ…
အဲ.ဒါက …ဂလိုရှိတယ် ..။
ကိုယ်.အလှည်.ကျရင်လည်း အကြီးကြီးပေါ်ထိုင်မယ်ဆိုပြီး …….
ကွန်ပြူတာလိုလို ဘာလိုထားတာကတော. …..
ဘာရယ်ဟုတ်ဖူး …လူရှိန်တာပေါ. ……။
သေချာကြည့်လေ မမြင်လေဘဲ ..
ကတိုက်စိုး ပြောသလို ကြွက်ရော၊ ကီးဘုတ်ရော ..
ပြီးတော့ ကြိုးတွေလည်း တစ်ချောင်းမှ တွေ့ရဘူး ..
ငါ့ မျက်စိများ မှုန်လို့လား မသိ …
စားပွဲ က ကြီး ပြီး ရှည် တော့ ၊ အ ချင်းချင်း ပြော တဲ့ စကား သေခြာ မ ကြား ရ လို့ ၊ Skype နဲ့ net conference လုပ် နေ ကြ သည် ၊ သို့မဟုတ် facebook နဲ့ chat နေ ကြ သည် ဟု လေ့လာ ၊ သုံးသပ် ၊ ယူဆ ရ ပါ ကြောင်း ။
ကိုကြောင်ဂျီး ဓါတ်ပုံကြည့်ဘီး အထင်မှားဒါဘာ..
ဒဂယ်ဂ အစည်းဝေး လုပ်နေဂျဒါမဟုတ်ဘူးဗျ..
ဗိုက်ကလေးရဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ဂိမ်းလာဂဇားနေဂျဒါဘာ..
ဟုတ်သားပဲ ကိုကြောင်ကြီးကလည်း ဗိုက်ကလေးဆိုင်မှာ ဂိမ်းဆော့နေတာဖြစ်မှာပါ……..။ ဒါ့ပုံလေးတစ်ပုံကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်မစောသင့်ပါဘူးနော်………
ဂိမ်းဆော့နေရင်း မိန်းမလာခေါ်လို့ညာတာပါတေးနဲ့ထသွားကြတာ
တစ်ယောက် ၂ ထောင်ကျပါဒယ်
“ကျုပ်တို့ဗမာတွေကို နေ၇ာအနှံ့မှာ ဝေဖန်ပြီးအကြံပေးသူတွေထက် အပြစ်၇ှာတတ်သူတွေများတယ်လို့ကျုပ်ထင်တယ် ၊ ခုထိလည်းပါလီမန်မှာ ကျုပ်ကိုအကြံပေးဖို့ထက် ကွယ်၇ာမှာ အပုတ်ချဖို့ချောင်းနေတဲ့ သူတွေကပိုများတယ်။” (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း)
ဗိုလ်ချုပ်နဲ့က တခြားစီပါ။ အခုပြောနေတာက လူကြီးတွေက ကလေးအထာတွေလုပ်နေလို့
ပြောနေတာ ပျက်စီးရာပျက်စီကြောင်းမပါဘူး။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို
ကြိုဆိုပါတယ်။ မရှိတာကိုအရှိလုပ်ချင်တာကိုပြောနေတာ အဲဒီခုံတွေဘယ်လောက်ပေးရမယ်
ထင်လဲ ဒို့ဗိုလ်ချုပ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မွဲနေတုန်းဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူး ဟန်တွေမထုတ်ဘူး အလုပ်ကို
ပဲဦးစားပေးမှာ။ နေပြည်တော်က အဲဒီအဆောက်အဦးတွေ ဘယ်လောက်ကုန်ကျမယ်ထင်တုန်း
သမ္မတအိမ်တော်မှာ အခန်းပေါင်းဘယ်လောက်ပါမယ်ထင်တုန်း။ အဆောင်ပေါင်းဘယ်လောက်
ရှိမယ်ထင်တုန်း ပြောကြည့်လေ အဲဒီအခန်းတွေအကုန် အသုံးချရဲ့လား တကယ်ရောလိုအပ်လား
စဉ်းစားမိရဲ့လား။ အခုပုံမှာပဲကြည့် ဒို့ဗိုလ်ချုပ်ဆို ဒီလို အခင်းအကျင်းမျိုးကိုလက်ခံမယ်ထင်နေလား။ အသုံးမဲမပြုပဲ မသုံးတတ်ပဲ ကွန်ပြူတာဆိုတာမ
လိုဘူး။ ကွန်ပြူတာရှိမှ သုံးမှပြည်သူကအထင်ကြီးမယ် အားကိုးမယ်။ နိုင်ငံတကာကို ၀င်ဆန့်မယ်ထင်နေတယ်နဲ့တူတယ်။ တကယ်က ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအရည်အချင်းပဲလိုတယ်
သမဒဂျီး ဖင်ကလေး နိမ့်လျှောနဲ့ ထိုင်နေတဲ့ ရာဇက္ကနြေ္ဒနဲ့
ဒု သမဒ လောက်တောင် မခန့်ဘူး…
ဧည့်သည်တော်တွေ လက်ခံတွေ့တဲ့နေရာဆို မလိုအပ်ပဲ အကြီးအကျယ် ခန်းနားအောင်လုပ်ထားတယ်။ မြန်မာ့ဇာတ်သဘင် နောက် ပိုင်း ရာဇ၀င်ဇာတ်ကြီး က နေတဲ့အတိုင်းပဲ။
ကျယ်ရမှာက စိတ်သဘောထားနဲ့ အမြင်၊ ကျယ်နေတာက တလွဲတွေပဲ။
နံပါတ်(၁) တစ်ခုံလွတ်နေတယ်။ ဘယ်သူခုံလဲ။
နံပါတ်(၂) တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် မမြင်ရတော့ အိပ်ငိုက်လို့ရတယ်။(၀ါသနာပါရင် ခွတ်ပုံးတောင်ခုတ်လို့ရတယ်)
နံပါတ်(၃) ရွှေတိုက်ပြောသလိုမော်နီတာတွေက မှန်ကြည့်လို့တယ်။
နံပါတ်(၄) သမ္မတကြီးက အရှေ့က စာရွက်ကို ကြည့်ပြီးပြောရာမှာ အားမရလို့ ဖင်လျောထိုင်ပြီးပြောနေပုံရ။လျောပြောနည်းလို့မှတ်။